ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် – မိုးလေဝသကိရိယာ – မိုးလေဝသတည်နေရာများ – မိုးလေဝသမြေပုံ – မိုးလေဝသသတင်းအချက်အလက်
Celsius နှင့် Fahrenheit ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်သည် Celsius နှင့် Fahrenheit တွင်ဖြစ်သည်, အောက်ဖော်ပြပါရာသီဥတုအခြေအနေ tool ကိုဝန်ဆောင်နေစဉ်ကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်ရှည်ပါ ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုတည်နေရာများကိုရှာဖွေရန်အပေါ်ထောင့်ရှိ magnifier အိုင်ကွန်ကိုသုံးပါ ပြီးတော့ Celsius နဲ့ Fahrenheit အကြားပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်.
April 13th 2021, အင်္ဂါနေ့
°ကို C | °ကို C
ရာသီဥတုကိုရှာချင်ပါတယ် တွင် °ကို C°F ကို .
အောက်ပါ Weather map ကိုသင်၏ mouse ဖြင့်ဆွဲယူ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာကိုမဆိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်, လေရဲ့ ဦး တည်ချက်နှင့်လက်ရှိရာသီဥတုဒီဂရီစသည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, ဝင်းဒိုးအောက်ခြေရှိဆလိုက်ဘားကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် အချိန်ပြောင်းလဲ ကွန်ပျူတာချုံ့ခြင်းနှင့်ချဲ့ခြင်းနှင့်ချဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ပါ.
မင်းစိတ် ၀ င်စားသောမြို့ကိုတွေ့သောအခါ, သင်နာမကိုနှိပ်နိုင်သည်, သငျသညျထိုမြို့ရဲ့အခြေအနေများအပေါ်အသေးစိတ်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ရပါလိမ့်မယ်.
ဆုငှေ: ထိပ်တန်း 10 ပုံမှန်မဟုတ်သောရာသီဥတုဖြစ်စဉ်
ဘဝ၌စကားတစ်ခွန်းရှိသည်, တစ်ခုတည်းသော2အာမခံထားတဲ့ဘဝရဲ့အရာတွေဟာမင်းရဲ့အခွန်ကိုပေးဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးသင်သေလိမ့်မယ်ဆိုတာပါ, ကြွင်းသောအရာအလုံးစုံသေချာသည်မဟုတ်.
သို့သျောလညျး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကိုခန့်မှန်းရန်, မိုးလေဝသ, သင်္ချာပုံစံသုံးပါ, အရာတော်တော်လေးတိကျမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်ပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမှားနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ရာသီဥတုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိစ္စ.
ငါတို့မိုးလေဝသကိရိယာကိုသင်ကြိုက်တယ်၊, သင်အကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်, ရုံကိုသွား တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fweather-forecast%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)